Tue, May 26, 2020 at 8:51pm
शेयर बजारमा सामान्य सुधार, नेप्से २ अंकले बढेर १ हजार २ सय ४१ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, १६ असोज धितोपत्र बजारमा मंगलबार शेयरको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ६९ बिन्दुले बढेर एक हजार २४१ दशमलव ३६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शुन्य दशमलव ६५ बिन्दुले बढेर २६३ दशमलव ४५ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भए पनि कारोवार..
शेयर बजारः दोहोरो अंकले ओरालो, नेप्से १८ अंकले घटेर १ हजार २ सय ३८ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, १५ असोज धितोपत्र बजारमा सोमबार पनि शेयरको मूल्य ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बजार १८.०४ बिन्दुले घटेर एक हजार २३८.६७ पुगेको छ । आइतबार जस्तै सोमबार पनि बजार दोहोरो मूल्यले ओरालो लागेको हो । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत ४.२९ बिन्दुले घटेर २६२.८० बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार रकममा समेत सोमबार गिरावट आएको स्टकले..
शेयर बजार दोहोरो अङ्कको गिरावट, नेप्से १० अंकले घटेर १ हजार २ सय ५६ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, १४ असोज धितोपत्र बजारमा आइतबार शेयरको मूल्यमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ । अघिल्लो साता सकारात्मक बिन्दुमा पुग्दै कारोवार रकम र कारोबार सूचकमा समेत वृद्धि भएको बजार दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका अनुसार शेयर कारोबार सूचक नेप्से १०.४७ बिन्दुले घटेर एक हजार २५६.७१ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक समेत २.१४..
शेयर बजार : ३ अर्ब बढीको कारोवार, गत साताको भन्दा २६ दशमलव शुन्य २ प्रतिशतले बढी
काठमाडौँ, १३ असोज धितोपत्र बजारमा यस साता रु तीन अर्ब ३० करोड ८१ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको शेयर कारोवार भएको छ । कूल १८९ कम्पनीको एक करोड ६७ लाख ७२ हजार २४० कित्ता शेयर खरीद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । कारोवार रकम गत साताको भन्दा २६ दशमलव शुन्य दुई प्रतिशतले बढी हो । गत साता १८९ कम्पनीको ९०..
दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, नेप्से २२ अंकले बढेर १ हजार २ सय ७९ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, ९ असोज धितोपत्र बजारमा मंगलबार शेयरको मूल्य दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । शेयर कारोवारमापक नेप्से परिसूचक २२ दशमलव ३ बिन्दुले बढेर एक हजार २७९ दशमलव ९८ बिन्दुमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस दिन थालेको र शेयरमा लगानीका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको भन्दै बजारमा लगानीकर्ता ओइरिएपछि नेप्से परिसूचक र कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको हो । सोमबारको बिदा..
काठमाडौँ, ७ असोज धितोपत्र बजारमा आइतबार शेयरको मूल्य सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २.६१ विन्दुले बढेर एक हजार २५७.६८ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.८२ विन्दुले बढेर २६६.९१ विन्दुमा पुगेको छ । सामान्य अङ्कले बढेको बजारमा कारोवार रकममा भने वृद्धि भएको छ । कूल..
शेयर बजार : २ अर्ब ६२ करोडको कारोबार, ९० लाख ७० हजार ७ सय ७० कित्ता शेयर खरिद बिक्री
काठमाडौँ, ६ असोज धितोपत्र बजारमा यस साता रु दुई अर्ब ६२ करोड ५० लाख १४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कूल १८९ कम्पनीको ९० लाख ७० हजार ७७० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २४.९१ प्रतिशत बढी हो । गतसाता कूल १८६ कम्पनीको एक करोड दुई लाख ५५ हजार ६८० कित्ता..
शेयर बजारमा सामान्य गिरावट, नेप्से ३ अंकले घटेर १ हजार २ सय ५५ अंकमा आईपुग्यो
काठमाडौँ, ४ असोज धितोपत्र बजारमा बिहिबार शेयरको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ३.७४ बिन्दुले घटेर एक हजार २५५.०७ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.५१ बिन्दुले घटेर २६६.०९ बिन्दुमा पुगेको छ । कूल १६७ कम्पनीको २० लाख १५ हजार ८२९ कित्ता शेयर रु ५५ करोड ५०..
सामान्य अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, नेप्से २ अंकले बढेर १ हजार २ सय ५८ बिन्दुमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, २ असोज धितोपत्र बजारमा मंगलबार सामान्य सुधार आएको छ । सोमबार थामिएको शेयर बजार सामान्य अङ्कले मात्रै वृद्धि भएको हो । शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक २ दशमलब ४१ बिन्दुले बढेर एक हजार २५८ दशमलब ८१ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलब १६ बिन्दुले बढेर २६६ दशमलब ६० बिन्दुमा पुगेको छ..
नेपाल स्टक एक्चेञ्ज : धितोपत्र बजार अनलाइनमा जान समय लाग्ने, यस्ता छन् समस्याहरु !
काठमाडौँ, १ असोज धितोपत्र बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजान अझै दुई महिना लाग्ने भएको छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षण शुरु भएको जानकारी दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्चेञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार आगामी दुई महिनापछि मात्रै शेयर कारोबार पूर्णरुपमा अनलाइनमा हुनेछ । निर्धारित समयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा तयारी हुन नसक्दा पूर्णरुपमा कारोबार अनलाइनमार्फत हुन नसकेको स्टकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह..
थामियो शेयर बजार, नेप्से ०.३१ अङ्कले घटेर १ हजार २ सय ५६ बिन्दुमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, १ असोज आइतबार दोहोरो अङ्कले बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर सोमबार सामान्य अङ्कले घटेको छ । शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ०.३१ अङ्कले घटेर एक हजार २५६.४० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४९ बिन्दुले घटेर २६६.४४ बिन्दुमा कायम भएको छ । कूल १६७ कम्पनीको २४ लाख २५ हजार ३०३ कित्ता शेयर रु ६८..
शेयर बजार दोहोरो अङ्कले वृद्धि, नेप्से ११ अङ्कले उकालो लागेर १ हजार २ सय ५६ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, ३१ भदौ धितोपत्र बजारमा पछिल्ला दिनमा उत्साहको सञ्चार भएको छ । यस साताको कारोवारको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ११.६९ अङ्कले वृद्धि भएर एक हजार २५६.५३ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.६६ विन्दुले बढेर २६६.९३ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से..
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर सर्वसाधारणलाई दशैँपछि बाँडिने
दोलखा, २९ भदौ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दशैँपछि बाँडफाँड हुने भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड दशैँपछि गरिने सो आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । जिल्लावासीका लागि जारी भएको शेयर भदौ २१ गतेमात्र सकिएको थियो । शेयरका लागि तीन गुणाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । सो आयोजनाको साधारण शेयर कात्तिक अन्तिम साता..
दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, नेप्से १४ अंकले बढेर १ हजार २ सय ४४ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, २८ भदौ शेयर बजार बिहिबार पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । लगातार उकालो लाग्दै आएको बजार बिहिबार नयाँ विन्दुमा पुगेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १४.१३ विन्दुले बढेर एक हजार २४४.८४ विन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ३.४७ विन्दुले बढेर २६४.२७ विन्दुमा पुगेको छ । बिहिबार कारोवार रकममा..
शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, नेप्से १३ अंकले वृद्धि भई १ हजार २ सय ३० बिन्दुमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, २७ भदौ धितोपत्र बजारमा यस साताकै उच्च वृद्धि बुधबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १३.०६ अंकले वृद्धि भई एक हजार २३० बिन्दुमा पुगेको छ । बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि भई कारोवार रकममा समेत वृद्धि भएको छ । मंगलबार एक हजार २१७ बिन्दुमा रहेको शेयर आज १३.०६ अंकको वृद्धि सँगै अर्को उचाइमा पुगेको हो..
थामियो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक ७ अंकले बढेर १ हजार २ सय १८ अंकमा पुग्यो
काठमाडौँ, २६ भदौ लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार मंगलबार भने थामिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ६.७७ बिन्दुले बढेर एक हजार २१७.६५ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत १.८५ बिन्दुले बढेर २५८.०१ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार मंगलबार कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको छ । कूल..
बहुप्रतिक्षित माथिल्लो तामाकोशीको साधारण शेयरमा तीन गुणा बढी आवेदन
काठमाडौँ, २६ भदौ : माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको साधारण शेयरमा तीन गुणा बढीको आवेदन परेको छ । आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा तीन गुणा बढी आवेदन परेको हो । थप विवरण भने बिक्री प्रबन्धकले केही दिनमा उपलब्ध गराउने छ । करीब दुई लाख दोलखावासीले आयोजनाको साधारण शेयरमा आवेदन गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी..
शेयर बजारमा गिरावट, ८ अंकले घटेर १ हजार २ सय १० मा आइपुग्यो
काठमाडौँ, २५ भदौ धितोपत्र बजार सोमबार पनि पुनःओरालो लागेको छ । आइतबार दोहारो अङ्कले घटेको बजार सोमबार ८.१ बिन्दुले घटेर एक हजार २१० मा झरेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई अङ्कले घटेर २५६.१६ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कूल १६२ कम्पनीको ११ लाख ५९ हजार २७२ कित्ता शेयर रु २७ करोड ७४ लाख २२..
धितोपत्र बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा ! आधारभूत मूल्यमै विकास बैंकको शेयर [विस्तृत जानकारी]
काठमाडौँ, २५ भदौ धितोपत्र बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा धेरै समूह प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो पटक बजार उतारचढावको अवस्थामा छ । बजार तलमाथि हुँदा कारोवार परिसूचकसमेत नकारात्मक रहँदै आएको छ । केही कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाको शेयरबाहेक अधिकांश संस्थाको शेयरमा उच्च गिरावट आएको छ । यस्तै मेसोमा रहेको छ विकास बैंक समूह । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कूल ३३ वटा विकास बैंकको शेयर..
शेयर बजार दोहोरो अङ्कले ओरालो : परिसूचक ११ अंकले घटेर एक हजार २१९ अंकमा
काठमाडौँ, २४ भदौ धितोपत्र बजार आईतबार दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आईतबार नेप्से परिसूचक १०.७९ विन्दुले घटेर एक हजार २१८.९८ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २.१९ विन्दुले घटेर २५८.१६ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचक घटे पनि आईतबार कारोवार रकम भने बढेको छ । कूल १६६ कम्पनीको १२ लाख..
शेयर बजार २४ अंकले बढ्यो, नेप्से परिसूचक १ हजार २ सय ३४ अंकमा कायम
काठमाडौँ, २० भदौ विगत एक सातायता बढ्दै गएको सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १२३४ अंकमा कायम भएको छ। बुधबार २३ दशमलव ८९ अंकले बढेर परिसूचक सो अंकमा पुगेको हो। यस दिन कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार ७० करोड ८८ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। अघिल्लो दिन ५२ करोडको कारोबार भएको थियो। बजारको पुँजीकरण १४ खर्ब ६९ अर्ब कायम..
उकालो लाग्यो शेयर बजार, परिसूचक ४ अंकले बढेर १ हजार २ सय १० अंकमा कायम
काठमाडौँ, १९ भदौ शेयर बजारको परिसूचक नेप्से मंगलबार करिब ४ अंकले उकालो चढेको छ। ३. ९८ अंकले बढेर परिसूचक १२१० मा कायम भएको छ। यस दिन १७२ कम्पनीको ५२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। बजारको पुँजीकरण १४ खर्ब ४० अर्ब कायम भएको छ। यस दिन बैंकिङ ६, होटल १६, विकास बैंक ६, निर्जीवन बीमा २ र फाइनान्स तथा अन्य समूह १–१..
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयर बजार, ५४ करोड ६० लाख २१ हजार ७ सय १९ रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं , १८ भदौं साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचकमा १५.९८ अंकले वृद्धि देखिएको हो । १ हजार १ सय ९० दशमलव ५५ अंकबाट शुरु भएको कारोबार दिउसो २४ अंकले बढेर १ हजार २ सय १३ अंक भन्दा माथि पुगेको थियो । त्यसपछि केहीबेर ओरालो लागेको शेयर बजार अन्तिममा आएर १५.९८ घटेर नेप्सेपरिसूचक १..
काठमाडौँ, १७ भदौ साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा सुखद शुरुवात भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ८.५९ बिन्दुले बढेर एक हजार १९० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापक सूचक सेन्सेटिभ परिसूचक २.०१ बिन्दुले बढेर २५१.८० बिन्दुमा पुगेको छ । गत साता कारोवार रकम रु एक अर्बभन्दा कम रहेको थियो । स्टककाअनुसार आज कूल..
काठमाडौँ, १७ भदौ कुनै समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद गर्नुलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिन्थ्यो । सर्वसाधारण घण्टौँ लाइन लागेर भएपनि शेयर खरिद गर्न आतुर हुन्थे । पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारका कारण ‘क’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरसमेत घटेको छ । यसबाट पूराना लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेको भएपनि नयाँ लगानीकर्तालाई भने अवसर प्रदान गरेको छ । नेपाल स्टक..
काठमाडौँ, १६ भदौ धितोपत्र बजारमा यस साता रु ८० करोड ३० लाख सात हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कूल २५ लाख ४२ हजार ७१० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३१ दशमलब ८१ प्रतिशत कम हो । कारोबारका आधारमा हेर्दा यस साता पनि रु एक अर्ब बराबरको पनि कारोबार..
काठमाडौँ, १४ भदौ निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार बिहिबार भने ९.३९ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार करीब १० अङ्कले बजार वृद्धि हुँदा एक हजार १८१.६९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.९८ बिन्दुले वृद्धि भई २४९.७९ अङ्कमा पुगेको छ । कूल १६७ कम्पनीका छ लाख ९८ हजार ३७८ कित्ता शेयर रु २१..
काठमाडौँ, १२ भदौ लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा मंगलबार भने सामान्य सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १.३७ बिन्दुले बढेर एक हजार १७७.०९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१९ बिन्दुले बढेर २४८.६१ बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार कूल १५४ कम्पनीको ६ लाख २२ हजार ८०१ कित्ता शेयर..
फेरी घट्यो शेयर बजार, नेप्से ३ अंकले घटेर १ हजार १ सय ७५ अंकमा आइपुग्यो
काठमाडौँ, १० भदौ निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार साताको पहिलो दिन आइतबार पनि घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २.७८ विन्दुले घटेर एक हजार १७५.७२ विन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.५७ विन्दुले घटेर २४८.४२ विन्दुमा कायम भएको छ । कूल १४६ कम्पनीको रु छ लाख नौ हजार २५७ कित्ता शेयर..
काठमाडौँ, ९ भदौ धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब १७ करोड ७५ लाख ७१ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कूल ४४ लाख २१ हजार ९५० कित्ता शेयर खरीद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १७ दशमलव ८४ प्रतिशत कम हो । गत साता १८५ कम्पनीको ४५ लाख दुई हजार चार सय ५० कित्ता..
Results 589: You are at page 14 of 20